Jaaliyada Reer Somaliland Ee Kunol Sweden Oo Ku Hawlan Xaflado Qaadhan Loogu Uruurinayo Dadka Ay Abaaruhu Saameyeen Ee Ku Sugan Somaliland |
Jaaliyada Reer Somaliland Ee Kunol Sweden Oo Ku Hawlan Xaflado Qaadhan Loogu Uruurinayo Dadka Ay Abaaruhu Saameyeen Ee Ku Sugan Somaliland
Xaflaad Dalka Sweden-Stockholm ka dhacaysa oo abaraaha lacag loogu uruurinayo.
Abaarta ka dhacday Somaliland aya ah ti ugu darnayd labataan`ki sano ee la so dhafay. Siday ay sheegtay warbixin ka soo baxday Qaramada Midoobay, dhowr milyan oo qof aya ku jira xaalad aad u daran, kuwa oo reer guura uu badan. halkaas oo sagaal ka mid ah tobankii qof ee reer guragi ku waayeen xoolahodii sabab´na u tahay abaartu.Roob yarantu waxa kale oo ay tirtirtay dhamaan ba wax so saarki beeraha, tas oo sabaabtay cunta yari bahsaan. Jamhuriyada Somaliland aya lagu qiyasa inay abaartu laysay ku dhawaad 80% xoolihi ku noola dalka, taas oo keentay inay kumanaan qof aay gobahay kunoolayen ka qaxeen.
Dhamaan wadamada qarada Europé gaar ahan Sweden ayeey bilihi la so dhafaay, dadaalo xoogan ka socdeen taas oo lacaga´go loogu uruurinayey ummada abaartu sameysey. Laakin nasib daro xaladu wali way adaag tahay, maadama ayna wax robaab ka diin,gobolada abaartu sida ba´an uu sameysay ee bari´ga Somaliland. Iyada laga soo waramay dad ku geeriyoday sababo la xidhidha abaarta, xaalada shacabkuna
maalin ba ka soo darayso, ramadan´´tina fooda inagu hayso. Waxa lagama maarman noqotay in loo gurmado shacaabka si noloshooda loo badbadiyo. Madasha facebooka ee magaceeda la yidha Voice Of Somaliland aya bilowday olole lacag loogu uruurinayo abaarta, taas oo laga dheex ababulayey social media´ha.
Imikana waxa la biilabay abaabulay wajigii labada oo ay iska kashanayan ,Madasha facebooka ee voice of Somaliland, Dalaada guud ee jaliyadaha Somaliland iyo Safirka Somaliland ee sweden, MD Zakariye Xassan Wacays. Xafladaan aya ka dhici doonta Sweden gaar ahan Casiimadda Stockholm bisha may 5. Voice of somaliland waxay ugu baqaaysa dhamaan shacabka reer Somaliland ee ku´nool Sweden inay xaflaadka ka so qayb galaan, sii aay walaalahoda baahan ugu gurmadaan.
”Ugurmo, Dalkaaga iyo Dadkaaga”
Gudiida madaasha- Voice Of Somaliland